“မကြာခင်မှာ ထွက်ရှိလာတော့မယ့် သီချင်းအသစ်လေးရဲ့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပုံလေးတွေကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူမျှဝေလာခဲ့တဲ့ အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန်” – Cele Snap
“မကြာခင်မှာ ထွက်ရှိလာတော့မယ့် သီချင်းအသစ်လေးရဲ့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပုံလေးတွေကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူမျှဝေလာခဲ့တဲ့ အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန်”
Myanmar Idol Season(4)ရဲ့ Winner သမား တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသူလေး အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန်နဲ့ ပရိသတ်တွေကို အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ အက်စတာကတော့ သီချင်းမျိုးစုံကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ သီဆိုနိုင် ရုံသာမက ကြော်ငြာလေးတွေကို ရိုက်ကူးနေတာတွေလည်း တွေ့ရမှာပါပဲနော်။ သူမရဲ့ထွက်ရှိထားသမျှ သီချင်းတွေဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားအောင်မြင်နေတာပဲဖြစ်ပါ တယ်။
အက်စတာကတော့ သီချင်းအသစ်တွေထွက်ရှိ လာနိုင်ဖို့ကိုလည်း ကြိုးစားနေတဲ့ သူတစ်ဦးပါပဲနော်။ သူမဟာဆိုရင် အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ(၁၅)ရက်နေ့မှာတော့ အက်စတာက”Intro for the second single song (Music Teaser) Please see the Music Teaser and the Official MTV coming inafew days. Down below the Offical Youtube Link. Please Subscribe, Like and Share. Thanks to all my sweeties”လို့ဆိုပြီး သီချင်းအသစ်အတွက် ကြိုးစားပြင်ဆင်နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလာ ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အက်စတာရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါ တယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးသာ ယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source….Esther DCS’s Facebook
Myanmar Idol Season(4)ရဲ့ Winner သမား တဈဦးဖွဈတဲ့ ခငျြးတိုငျးရငျးသူလေး အကျစတာဒေါ့သျခငျြးဆုနျနဲ့ ပရိသတျတှကေို အထူးတလညျ မိတျဆကျပေးဖို့မလိုလောကျဘူးထငျပါတယျ။ အကျစတာကတော့ သီခငျြးမြိုးစုံကို ကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျစှာ သီဆိုနိုငျ ရုံသာမက ကွျောငွာလေးတှကေို ရိုကျကူးနတောတှလေညျး တှရေ့မှာပါပဲနျော။ သူမရဲ့ထှကျရှိထားသမြှ သီခငျြးတှဟောဆိုရငျ ပရိသတျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားအောငျမွငျနတောပဲဖွဈပါ တယျ။
အကျစတာကတော့ သီခငျြးအသဈတှထှေကျရှိ လာနိုငျဖို့ကိုလညျး ကွိုးစားနတေဲ့ သူတဈဦးပါပဲနျော။ သူမဟာဆိုရငျ အမှတျတရပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီဇငျဘာ(၁၅)ရကျနမှေ့ာတော့ အကျစတာက”Intro for the second single song (Music Teaser) Please see the Music Teaser and the Official MTV coming inafew days. Down below the Offical Youtube Link. Please Subscribe, Like and Share. Thanks to all my sweeties”လို့ဆိုပွီး သီခငျြးအသဈအတှကျ ကွိုးစားပွငျဆငျနတေဲ့ ဗီဒီယိုဖျိုငျလေးကို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျပေးလာ ခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
အကျစတာရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို ပရိသတျတှအေတှကျပွနျလညျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါ တယျနျော။ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှအေားလုံးသာ ယာပြျောရှငျတဲ့နရေ့ကျလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
ိကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသားဒွေးနဲ့အတူ ရိုက်ကူး ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရလေးကို ပြသလာခဲ့တဲ့ မခိုင်လေးရဲ့ ဗီဒီယိုလေး